အဆိုပါ centrifugal စုပ်စက်စမ်းသပ်လမ်းဘာတွေလဲ? - တရုတ်ရှန်ဟိုင်း SOG ညှစ်ထုတ်လိုက်
အများအားဖြင့်က The centrifugal Pump စမ်းသပ်ခြင်းအမျိုးအစားစမ်းသပ်ခြင်းများနှင့်စက်ရုံစမ်းသပ် Include:
အဆိုပါ centrifugal စုပ်စက်စမ်းသပ် ─ type ကိုစမ်းသပ်ခြင်း
type စမ်းသပ်မှုများပါဝင်သည်: စသည်တို့ကို running စမ်းသပ်မှု, စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုနှင့်သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောစမ်းသပ်မှုများနှင့်ဆူညံသံတုန်ခါမှုစမ်းသပ်မှု,
စမ်းသပ်မှုအပြေးသောအခါ, ထိုကဲ့သို့သောစမ်းသပ်မှုပြေး Hangover ချဒ်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့အရပျအပျေါ wear နဲ့မျက်ရည်ဆောင်သော, အပူချိန်စုပ်စက်ဖြစ်စေသောစပါးနှင့်ထုပ်ပိုး၏မြင့်တက်, တုန်ခါမှုအတွက်စုပ်စက်ထုပ်ပိုး၏ယိုစိမ့်ခြင်းနှင့် noise.About တံဆိပ်ခတ်လက်စွပ်ချိန်ခွင်လျှာ disc ကိုစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
B က: အဆိုပါစွမ်းဆောင်ရည်ကိုစမ်းသပ်
performance စမ်းသပ်အများဆုံးစီးဆင်းမှု၏ 15% သည်စုပ်စက်၏ဓာတ်လှေကား, ရိုးတံပါဝါ, ထိရောက်မှုအကြားဆက်ဆံရေးကိုဆုံးဖြတ်ရန်နှင့် rate.Centrifugal စုပ်စက် (အနည်းဆုံး) သုညစီးဆင်းမှုကနေစတင်သည်စီးဆင်းရန်ဖြစ်ပါသည်အကွာအဝေးကိုအသုံးပြုပြီးတိုင်းတာထက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်၏ရောနှောစီးဆင်းစုပ်စက် , axial စီးဆင်းမှုစုပ်စက်နှင့်ရေဝဲစုပ်စက်ကအနည်းဆုံး 15% မှနိမ့်ဆုံးစီးဆင်းမှုနှုန်းကို measurement.Measuring အချက်ထက်လျော့နည်း centrifugal စုပ်စက်၏တပြင်လုံးကို curve ပေါ်မှာယူနီဖောင်းဖြစ်နှင့်ရေဝဲကျော်ကို 13 မှတ်, axial စီးဆင်းမှုစုပ်စက်, ရောနှောစုပ်သငျ့သညျ, အဆို့ရှင်အပြည့်အဝပွင့်လင်းစတင် ကျော်ကို 15 မှတ်စုပ် -flow ။
ကို C: Cavitation စမ်းသပ်
အဆိုပါဝေဖန် cavitation စရိတ်နှင့် flow.Or အကြားဆက်ဆံရေးအတွက်အရေးပါတဲ့ cavitation စရိတ်အတည်ပြုရန်ဖို့အသုံးပြုဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့အသုံးပြု Cavitation စမ်းသပ်မှုထက်လျော့နည်းခြင်းသို့မဟုတ်လိုအပ်သော cavitation စရိတ်များ၏စုပ်စက်၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်ညီမျှသည်။
အဆိုပါ centrifugal စုပ်စက်စမ်းသပ် ─ စက်ရုံစမ်းသပ်
စက်ရုံစမ်းသပ်ကြီးမားသောစီးဆင်းမှုအချက်များ, သူတို့ကသေးငယ်တဲ့စီးဆင်းမှုမှတ်များ၏နယ်ပယ်အတွင်းအလုပ်လုပ်မှသာလေ့ centrifugal စုပ်စက်၏စက်ရုံ .Factory စမ်းသပ်မှုစွန့်ခွာရှေ့တော်၌ centrifugal စုပ်စက်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလိုအပ်ချက်များကိုက်ညီနေသည်ရှိမရှိအသွားအလာစစ်ဆေးရာတွင်အသုံးပြုသည်
Post ကိုအချိန်: Jun-28-2018